Dinika politika:EFA MIPETRAKA NY FITONIANA -
AccueilRaharaham-pirenenaDinika politika:EFA MIPETRAKA NY FITONIANA
10/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mandroso amin’ny fihatsarana hatrany ny fiainan’i Madagasikara amin’ny ankapobeny. Raha natao ny dinika politika niarahan’ny fitondram-panjakana malagasy sy ny vondrona eropeana omaly teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha dia tsy nisalasala ny Ambasadaoron’ity vondrona lehibe ity, Sanchez-Benedito Antonio, nilaza fa « efa mihamandroso sy mivoatra amin’ny fihatsarana hatrany eto Madagasikara ». Dinika fahefatra ity natao ity taorian’ny fahatelo natao tany Taolagnaro ny 17 Marsa 2016 teo. Nandritra ity dinika politika ity no nanaovana tomban’ezaka ny asa vitan’i Madagasikara sy ny dingana tamin’ireo zavatra nifanekena fa handraisana andraikitra. Mandroso ny raharaha politika satria voamarik’ity ambasadaoro ity fa efa misy ny fitoniana ara-politika eto Madagasikara ary mampirisika hatrany ny fanjakana mba hiroso hatrany amin’ny fifampiresahana mba hitsinjovana ny fifidianana izay atao amin’ny 2018. Eo koa ny fametrahana ny Cndh izay mikasika ny fiarovana ny zon’olombelona, sy ny fiarovana ny fananany. Eo koa ny efa fipetrahan’ny « Haute Cour de Justice » ary efa miasa. Mikasika ny sehatry ny toekarena dia efa manomboka miarina izany ary hita ny fihatsaram-pitantanana eo amin’ny volam-panjakana, ny fahazoana ny Fec avy amin’ny Fmi, efa mihatsara ny tontolon’ny fandraharahana, miverina ny fitokisan’ny mpampiasa vola, ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariaham-pitondrana dia efa hita ny fandraisan’anjaran’ny rehetra.
Niverina amin’ny toerany i Madagasikara
Eo amin’ny sehatra ara-diplomatika dia fanamby lehibe no vitan’i Madagasikara satria namerina ny toerany eo anatrehan’izao tontolo izao ny fahombiazan’ny fivoriana an-tampon’ny Comesa sy ny Frankôfônia ary antony iray izay naharesy lahatra ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola izany nandritra ny fivoriana natao tany Parisy farany teo ka nahazoana ny vola 6,4 miliara dolara avy amin’ny mpamatsy vola ary 4 miliara dolara avy amin’ny mpampiasa vola amin’ny sehatra tsy miankina. Amin’ny taona ho avy, izany hoe any ho any amin’ny volana Aprily any dia hivoaka ny 15 tapitrisa euros avy amin’ny vondrona eropeana. Tsapan’ny vondrona eropeana fa niezaka mafy ny mpitondra mba hanaingana ny toekarena sy ny fijerena ny sosialim-bahoaka. Isan’ireo tena fototry ny fiaraha-miasan’ny fitondrana malagasy sy ny vondrona eropeana koa anefa ny fanatanterahana ny PIN na ny Programme Indicatif National mba hisian’ny fampandrosoana. Na izany aza anefa dia mbola nohamafisin’ity ambasadaoro ity fa amin’ny 27 Novambra 2017 dia hisy ny fivoriana an-tampony atao any Abidjan ary hiompana bebe kokoa amin’ny fanomezana sehatra ny tanora sy ny famoronana asa. Nanatrika ity fotoana ity ny ambasadaoron’i Alemana, sy ireo solontenan’ny firenena sasany ao anatin’ny vondrona eropeana ary ny an’i Madagasikara kosa dia ny lehibe’ny governemanta sy mpikambana vitsivitsy.